အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု သက်တမ်းတိုးမြှင့်လိုက်တယ်ဆိုတာဟာ အမေရိကန် လွှတ်တော်ဖက်က ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေကို သက်တမ်း တိုးတာသာဖြစ်ပြီး အိမ်ဖြူတော်ဖက်က ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေ ဖယ်ရှားပြီးဖြစ်ကြောင်း နဲ့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ အမေရိကန်တွေဖက်က ယုံကြည်မှုရအောင် အလုပ်နဲ့သက်သေပြသွား မှာဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြန်ကြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ဒီနေ့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ရန်ကုန်မြို့ သိမ်ဖြူလမ်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာနရုံးမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးနည်း ဥပဒေ ပြဌာန်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ သတင်းထောက် တစ်ဦး အမေရိကန်က ပိတ်ဆို့မှု တစ်နှစ်သက်တမ်းတိုး လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းရာမှာ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က အခုလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
"အဓိကကတော့ ကျနော်တို့က ဒီပိတ်ဆို့မှုကို တတ်နိုင်သမျှ အကုန်လုံး ဖယ်ပေးစေချင်တယ်ဆိုတာက ဒါကျမှ ပြည်သူတွေရဲ့ လူမှုစီပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို မြန်မြန်လုပ်လို့ရမှာ သို့သော် အခုအကုန်တော်တော် များများ ဖယ်ထားပြီးပြီ ဥရောပသမဂ္ဂဆိုရင် အားလုံးနီးပါး ဖယ်လိုက်တယ်၊ ကျနော်တို့ကတော့ လက်ရှိရှိတဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်လို့ရနေပြီ၊ တစ်ကတော့ သူတို့သက်တမ်းတိုးပေမယ့်လည်း ကျနော်တို့လုပ်စရာရှိတဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရအောင်ဆက်လုပ်သွားမယ်၊ နှစ်ကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သူတို့ပိုပြီးတော့ ယုံကြည်လာအောင် အလုပ်နဲ့သက်သေပြသွားမယ်"
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိပေမယ့်လည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်တွေ လမ်းပွင့်ကာစ အခြေအနေမှာပဲရှိသေးသလို၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေ ဆက်လက်ပေါ်ပေါက်နေ ပြီး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွါးရေးကဏ္ဍမှာ စစ်တပ်ရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍ ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက် အမျိုးသားအရေးပေါ်အက်ဥပဒေနဲ့ ဆက်လက်အရေးယူရန် လိုအပ်တယ်လို့မိမိအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ကြောင်း စတဲ့အချက်တွေနဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက မေလ ၁၅ ရက်နေ့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ရှင်သန်ထွန်းကားပြီး နောက်ကြောင်းပြန် လှည့်မသွားအောင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ ဆက်လက်ကူညီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း သမ္မတ အိုးဘားမားက ပြောပါတယ်။
ဟုတ်ပါပြီ။ ဒို့တိုင်းပြည်ကတော့ တချိန်က ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းပြောဆန်း ပြောခဲ့သလို ”ဟိုနိုင်ငုံကီး” ဖြစ်နေပါပြီ။
May 19, 2014 08:31 PM
It is the funniest joke for this year. How canapresident adviser like U Ye Htut prove that the current quasi-democratic government is performing the real change? He is just the pawn on the chessboard of Field Marshal Than Shwe. Even his boss President Thein Sein can do nothing. How can he implement the real change? I want to suggest him to find the escape route before falling from grace like former intelligence Czar Khin Nyunt or former Foreign Minister Win Aung. No Brainer. Harrr Ha!
Long live Mr. Ye Htut, so that you can be prosecuted after we getareal democracy for crimes you committed as army officer. All army officers, not only you.